Friday June 17, 2011 - 10:04:48 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Taariikh: 17-06-2011, Muqdisho.
Ururada Saxaafadda ee kala ah Isutaga Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ iyo Ururka Warbaahinta Danta Qaran (JONA) waxay maanta soo gebagebeeyeen siminaar muddo laba maalmood ah xarunta Muqdisho Media House uga socday saxafiyiin heer sare ah oo ka shaqeeya warbaahinta Maxalliga ah.
Siminaarkaas oo ay fulintiisa iska kaashadeen Somali Journalists for National Agenda (JONA) iyo Associated Somali Journalists (ASOJ), madasha lagu qabtayna ay laheyd MMHouse , wuxuu ujeeddkiisu ahaa in Saxafiyiinta, gaar ahaana barnaamij sameeyeyaasha la baro sida loo sameeyo wararka la dabo galo, ama dabagalka saxaafadda (INVESTIGATIVE JOURNALISM).
Seminaarkan waxaa casharo aad muhiim u ah oo loo riyaaqay ka bixiyey macalimiin xirfad u leh saxaafadda, khibradna u leh oo muddo ka soo shaqeeyey warbaahinta.
Sidoo kale waxaa seminaarkan lagu dhegeystay dukumintari ku saabsan dilka saxafiyiinta oo uu horey u diyaariyey ustaad Liibaan Cabdi Cali oo ka tirsan idaacadda Qaranka ee Radiyo Muqdisho iyo idaacadda codka Mareykanka ee Radio Sawa ee Luuqadda Carabiga.
Saxafiyiintu waxay is dareensiiyeen baahidda loo qabay in la qabto hawshan oo kale oo la baro saxafiyiinta sida loo dabo galo warka, loo soo xaqiijiyo, cadeymo loogu helo kaddibna bulshada loogu bandhigo.
Ugu dambeyntii waxay saxafiyiinta si wada jir ah u cambaareeyeen xariga iyo handadaada lagu hayo warbaahinta iyo saxafiyiinta wardoonka ah ee bulshada dhexdeeda warka ka soo raadiya.
Waxayna dowladda iyo kooxaha ka soo horjeedda ugu baaqeen qodobada soo socda.
1. Inay joojiyaan beegsiga saxafiyiinta nooc walba oo uu yahay.
2. In la tixgeliyo xaquuqda madaxbanaanida saxaafadda, taas oo ay ku jirto xuriyadda ah inay wardoonaan, helaan, hubiyaan, kana siidaayaan warbaahinta ay u shaqeeyaan si aan caqabad iyo is hortaag laheyn.
3. In saxaafadda madaxa banaan laga qaado culeysyada iyo handadaadda ay ku hayaan kooxaha qarsoon iyo kuwa muuqda ee aan raalliga ka aheyn saxaafadda madaxa banaan.
Cabduqadir Barnaamij, Gudd. JONA, kana wakiil ah ASOJ